Nnwom 109 NA-TWI - Ɔhaw mu anwiinwii - Mekamfo wo, - Bible Gateway
Nnwom 108Nnwom 110
Nnwom 109 Nkwa Asem (NA-TWI)
109 Mekamfo wo, Onyankopɔn; nyɛ komm! 2 Amumɔyɛfo ne atorofo aba me so. Wɔka atorosɛm fa me ho, 3 na wɔka bɔne fa me ho, taa me so kwa. 4 Ɛwom sɛ medɔ wɔn, bɔ mpae ma wɔn, nanso wotia me. 5 Papa a meyɛ no, wɔde bɔne tua me so ka, na ɔdɔ a medɔ wɔn no, wɔde ɔtan tua me so ka.